On sept 1, 2019 3 135
Taorian’ny fikatonan’ny fivoriana tsy ara-potoana nataon’ireo solombavambahoakan’ny Madagasikara, dia nidina tany amin’ny Distrika nahalany azy ny Député Jean Michel Henri, questeur voalohany ao amin’ny Antenimeram-pirenena, Tsimbazaza. Tany Ambovombe Androy izy ny ny zoma 23 aogositra 2019.
Sady nisaotra ny vahoaka nametraka fitokisana taminy izy no nampahafantatra azy ireo fa voninahitra ho an’ny vahoakan’ambovobe ny nahalany azy ho questeur voalohany ao amin’ity andrim-panjakana ity. » Tombony ho an’ny vahoak’Ambovombe izany satria afaka mampatsiahy matetika ny fahefana mpanatanteraka izy amin’ny fanatontosana ny fampanantenana nataon’ny Filoha Andry Rajoelina. », hoy izy.
Nanolotra omby vositra 12 sy vary 1 T ary ranom-boakazo ho an’ny vahoaka ny solombavambahoaka mba ho fiarahana mifaly sy ho nofon-kena mitam-pihavanana izay nafanain’ny tarika Andry Garora .
Ankoatra ny fety, nanao asa sosialy ity olom-boafidy ity. Nisy ny famorana faobe maimaim-poana ny alahady 25 Aogositra sy ny alatsinainy 26 aogositra 2019 ka ankizy 500 no nisitraka izany. Marihina fa noho ny fahasahiranan’ny mponina dia maro no tsy mahatanteraka ity fomba ity. Nanampy tamin’ny famorana ny Dokotera FIAROVANA Lovanirina Céléstin, solombavambahoaka voafidy tao åmin’ny distrikan’ny Betafo. Nanampy koa ny Dokotera Bernard, mpitsabo avy any Antananarivo sy ny mpitsabo tany an-toerana.
Tetsy Ankilan’izay, noararaotin’ny mponina nilazana ny maharary azy ny fotoana, toy ny fandoavam-bola ao amin’ny hopitaly be, izay tsy zakan’ny fahefa-mividin’izy ireo. teo koa ny olana amin’ny rano fisotro madio sy ny rano ahafana mamboly.
Manoloana izany, manaitra ny fitondram-panjakana foibe sy ny tomponandraikitra mivantana ny amin’izany ny depiote Jean Michel Henri, mba hanafainganana ny fametrahana fotodrafitrasa mifandraika amin’izany satria efa manakaiky ny fotoanan’ny main-tany mampijaly ny mponina amin’ny rano fisotro madio.
FANDRIAMPAHALEMANA: VAKIN’NY ZANDARY ANDRIRY BETROKA, MANAKAIKY KOKOA NY MPONINA NY ZANDARIMARIAM-PIRENENA